ဂျီဘရော်လ်တာ - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆောင်ပုဒ်: "Montis Insignia Calpe"
နိုင်ငံတော် သီချင်း: "God Save the Queen" (official)
ဗြိတိသျှ ပင်လယ်ရပ်ခြား နယ်မြေ
၄ ဩဂုတ် ၁၇၀၄
၁၁ ဧပြီ ၁၇၁၃
၆.၁ စတုရန်းကီလိုမီတာ (အဆင့်: ၂၄၁)
၃၀,၀၀၁ (အဆင့် - ၂၂၂)
၄,၃၂၈/km2 (အဆင့် - ပဉ္စမ)
ပေါင် ၁ ဘီလီယံ
အလွန်မြင့် · ၂၀
ဂျီဘရော်လ်တာသည် မြေထဲပင်လယ်အဝ၌ ရှိသော အိုက်ဘေးရီးယန်း ကျွန်းဆွယ်၏ တောင်ဘက်အဆုံးတွင် တည်ရှိသည့် ဗြိတိသျှ ပင်လယ်ရပ်ခြား နယ်မြေ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဧရိယာစုစုပေါင်း ၆ စတုရန်းကီလိုမီတာ (၂.၃ စတုရန်းမိုင်) ခန့်ရှိသည်။ စပိန်နိုင်ငံတောင်ဘက် မြေထဲပင်လယ်ထဲသို့ ထိုးထွက်လျက်ရှိသော သန်လျက်စွန်း အငူပေါ်တွင် တည်ရှိလျက် ၁ မိုင်ခန့် ရှည်ပြီးလျှင် ၁ မိုင်ခန့် ကျယ်ပြန့်၍ ပေပေါင်း ၁၄ဝ မြင့်လေသည်။ ဂျီဘရော်လ်တာမြို့ကား ခံတပ်မြို့ ဖြစ်သည်။ အာဖရိကတိုက်၏ မြောက်ဘက်ဖျားနှင့် ဥရောပတိုက်ရှိ စပိန်နိုင်ငံ တောင်ဖျားမှာ ၁၂ မိုင်ခန့်သာ ကွာဝေးလျက် ဂျီဘရော်လ်တာ ကျောက်ဆောင်ကြီးသည် မြေထဲပင်လယ်ရေပြင်ထဲသို့ မြင့်မြင့်မားမား ထိုးထွက်လျက်ရှိရာ မြေထဲပင်လယ်နှင့်တကွ ဆူးအက် တူးမြောင်းကို ဖြတ်၍ အရှေ့ဖျားသို့သွားရာ ရေလမ်းကြောင်းကို စောင့်ရှောက်ကာကွယ်သော ခံတပ်ဖြစ်သည်။ ကျောက်ဆောင်၏ မြောက်ဘက်ဆုံးတွင် ဗြိတိသျှနယ်နှင့် စပိန်နယ်ကိုခြားထားသော ကြားနယ်မြေလွတ် ရှိလေသည်။ ယင်းကျောက်ဆောင်၏ အောက်ခြေသည် လူဦးရေထူထပ်သော မြို့ဧရိယာဖြစ်ကာ ဂျီဘရော်လ်တာနယ်သားနှင့် အခြားလူမျိုးပေါင်း ၃၀,၀၀၀ ခန့်ရှိသည်။
ခရစ် ၇၁၁ ခုနှစ်က မွတ်စလင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တစ်ဦးသည် ရေလက်ကြားကိုဖြတ်၍ ဂျီဘရော်လ်တာကို သိမ်းယူခဲ့ရာ ထိုကျောက်တောင်ကုန်းကို 'ဂျဗယ်အယ်တာရစ်'၏ ကျောက် တောင်ကုန်းဟု စစ်ဗိုလ်၏အမည်ကို အစွဲပြု၍ ပေးခဲ့ရာမှ ဂျီဘရော်လ်တာဟု ခေါ်တွင်လာသည်။ ထိုသူသည် ထိုနေရာ၌ပင် ခံတပ်တည်ဆောက်ခဲ့၏။ ၁၇ဝ၄ ခုနှစ်တွင် ဂျီဘရော်လ်တာကို ဗြိတိသျှတို့က စပိန်တို့ထံမှ သိမ်းယူပြီး ခံတပ်အခိုင်အခံ့ ပြုလုပ်ထားသည်။ သို့ဖြစ်၍ ၁၇၇၉-၁၇၈၃ ခုနှစ်များအတွင်း ပြင်သစ်နှင့် စပိန်တို့ ပူးပေါင်းလုပ်ကြံသော်လည်း မရခဲ့ချေ။
ခံတပ်မှ ပစ်ခတ်သော အမြောက်ကြီးများကြောင့် ရန်သူသင်္ဘောများသာ မီးလောင်ပျက်စီးသွားကြရလေသည်။ ခံတပ်မှာ ဖောက်ခွဲ၍ မရသော ကျောက်သားပကတိဖြစ်၍ အထူးခိုင်ခံ့ပြီး လျှင် ဖြိုခွင်းရန် ခဲယဉ်းလှလေသည်။ သင်္ဘောဆိပ်မှာ သင်္ဘောကြီးများပင် ဆိုက်ကပ်နိုင်၍ ကုန်သင်္ဘောများကို ကျောက်မီးသွေး ဖြည့်တင်းရာစခန်းလည်း ဖြစ်၏။ မြေထဲပင်လယ်၏ တံခါးဝတွင် ခန့်ညားထည်ဝါစွာ တည်ရှိသဖြင့် ဗြိတိသျှတို့အတွက် အရေးကြီးသော ချက်ကောင်းရေတပ်စခန်းတစ်ခု ဖြစ်လေသည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အတွင်းက ရန်သူဂျာမန်ဩဇာခံ ဗီရှီ ပြင်သစ်အစိုးရနှင့် အီတလီတို့က တိုက်ခိုက်သော်လည်း မအောင်မြင်ခဲ့ချေ။
ဂရိတို့သည် ထိုဂျီဘရော်လ်တာကျောက်တောင်စွန်းနှင့် အာဖရိကတိုက်ဖက်ရှိ အငူစွန်းတို့ကို ကမ္ဘာကြီး၏ အနောက်ဘက် တံခါးဝများဟုပင် ရှေးအခါက မှတ်ယူခဲ့ကြဖူးသည်။ 
↑ National Symbols။ Gibraltar.gov.gi။ 13 November 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၁ ဇွန် ၂၀၁၃ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Gibraltar: National anthem။ CIA World Factbook။ စီအိုင်အေ။ 12 April 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၂၅ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၁ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “National anthem: name: "Gibraltar Anthem" . . . note:adopted 1994; serves asalocal anthem; asaterritory of the United Kingdom, "God Save the Queen" remains official (see United Kingdom)”
↑ Abstract of Statistics 2009။ Statistics Office of the Government of Gibraltar (2009)။ 22 December 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 23 December 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ အရပ်သားလူဦးရေများတွင် ဂျီဘရော်လ်တာနယ်သားများ၊ အခြား ဗြိတိန်အရပ်သားများ ( ဗြိတိန်အခြေစိုက် ဆားဗစ်သမားများ၏ ဇနီးများနှင့် မိသားစုဝင်များ၊ ထို ဆားဗစ်သမားများ မပါဝင်) နှင့် ဗြိတိန်သား မဟုတ်သည့် အရပ်သားများ ပါဝင်သည်။ လာရောက်လည်ပတ်သူများနှင့် ခတ္တကူးပြောင်းသူများ မပါဝင်ပေ။
၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ဒေသခံနိုင်ငံသား ၂၃,၉၀၇ ယောက်၊ ဗြိတိန်နိုင်ငံသား ၃,၁၂၉ ယောက်နှင့် အခြားနိုင်ငံသား ၂,၃၉၅ ယောက်ရှိကာ စုစုပေါင်းလူဦးရေ ၂၉,၄၃၁ ယောက်ရှိသည်။ သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူသည့်ညတွင် လူဦးရေ ၃၁,၆၂၃ ယောက် ဂျီဘရော်လ်တာတွင် ရှိနေခဲ့ကြသည်။
ဂျီဘရော်လ်တာမြေပုံ Archived 29 March 2007 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျီဘရော်လ်တာ&oldid=727245" မှ ရယူရန်
ဗြိတိသျှ ပင်လယ်ရပ်ခြား နယ်မြေများ
ဤစာမျက်နှာကို ၂၅ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၉:၁၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။